Ag (silver) => ? | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
Ag = ? | Isu dheellitirka Kiimikada
qalin = ?
4Ag + O2 → 2 Ag2O
Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + MAYA2
lacag nitric acid amooniyam qalin biyaha nitrogen dioxide
(rnn) (dd đậm đặc) (rnn) (lng) (kh)
(Trang BAC) (xoog leh) (trung) (xoog leh) (kanu đỏ)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + MAYA2
Waa maxay xaaladda falcelinta Ag (silver) ee ka falcelisa HNO3 (nitric acid)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa AgNO3 (nitrate Silver) iyo H2O (biyaha) iyo NO2 (nitrogen dioxide)?
Ag lagu daray HNO3
Dhacdada ka dib Ag (silver) waxay la falgashaa HNO3 (nitric acid)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + MAYA2
Su'aalaha la xiriira badeecada AgNO3 (Nitrate Silver)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee AgNO3 (nitric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh AgNO3 (Nitrate Silver) sida badeecad ahaan?
lacag koloriin koloriin qalin
(rnn) (kh) (kt)
(Trang BAC) (trung)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Ag + Cl2 → 2AgCl
Waa maxay xaaladda falcelinta Ag (silver) ee Cl2 (chlorine)?
Sidee fal-celintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa AgCl (koloriin qalin ah)?
Ag wuxuu la falgalayaa Cl2
Dhacdada ka dib Ag (silver) waxay la falgashaa Cl2 (chlorine)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Ag + Cl2 → 2AgCl
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee AgCl (chlorine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh AgCl (silver chloride) alaab ahaan?
lacag bromin bromide qalin
(Trang BAC) (la soco)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Ag + Br2 → 2AgBr
Waa maxay xaaladda falcelinta Ag (silver) ee Br2 (bromine)
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa AgBr (silver bromide)?
Ag ayaa la falgala Br2
Dhacdada ka dib Ag (silver) waxay la falgashaa Br2 (bromine)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Ag + Br2 → 2AgBr
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee AgBr (bromine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh AgBr (silver bromide) alaab ahaan?